အရောင်မျက်စိကန်းသောစမ်းသပ်မှုအရအကောင်းဆုံးအသက်အရွယ်ဆိုတာဘာလဲ? - Iris က💡💻 - မျက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အပြာရောင်အလင်း Filter ကို🛌👀
အရောင်ကန်းလည်းအရောင်ရူပါရုံကိုချို့တဲ့အဖြစ်လူသိများသည်. အရောင်ကန်းမှုကြောင့်, လူတစ်ဦးအရောင်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်.
သူတို့ကစာရွက်ပေါ်တွင်အရောင်များကိုပစ်တဲ့အခါမှာကလေးများအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုအနိမ့် span ရှိ.
တစ်ဦးတည်းသာကလေးအကြောင်းထဲမှာအရောင်ကန်းကြောင့်ထိခိုက်နေသည် 25 ကလေးများ.
အဆိုပါ "တစ်မျိုးကတော့" မျက်စိ၏နောက်ကျောမှာတည်ရှိပါတယ်ထားတဲ့အရောင်ရူပါရုံကိုတာဝန်ရှိသည်.
တစ်မျိုးကတော့ဆဲလ်၏မရှိခြင်းကြောင့်, ကလေးတစ်ဦးအရောင် blindness နဲ့တစ်ဦးကလေးမွေးဖွားဖြစ်ပါသည်. ပတ်ပတ်လည်ဝါရှင်တန်၏ Optometric သမားတော်များအရ 8%, ယောက်ျားလေးများမိန်းကလေးတွေထက်လျော့နည်းသောအရောင်ကန်းကြောင့်ထိခိုက်နေကြ.
ဒါဟာယောက်ျားလေး၏အရောင်ကန်း၏အချိုးအစားမိန်းကလေးများထက် ပို. ကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်. အလင်းပြင်းထန်မှုနိမ့်သည်တဲ့အခါအရောင်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲသည်.
ကလေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အခါ4အဆိုပါတစ်မျိုးကတော့ပုံမှန်ကလေးသဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်သည့် developer များစတင်နေကြသည်နှစ်ပေါင်းလအရွယ်.
တစ်ဦး colorblind ကလေးကတစ်မျိုးကတော့အတွင်းကလေးတစ်ဦးအရောင်များခွဲခြားလို့မရပါဘူးများသောအားဖြင့်သူတို့ကအစားအနီနှင့်အစိမ်းအရောင်၏ခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်အညိုကိုမြင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောမှပျောက်ဆုံးနေနေစဉ်.
ဒါဟာမလွှဲမရှောင်တစ် colorblind အရောင်တွေမမွငျနိုငျမဆိုလိုနေသည်.
သူတို့ရောက်ရှိမှီတိုင်အောင်တစ်ဦးက colorblind အရောင်များခွဲခြားနိုင်သည်မဟုတ်4အသက်.
တချို့က colorblind ကြောင့် achromatopsia လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါမှအရောင်များတွေ့မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း. ထဲကတစ်ဦးတည်းသာကလေးက 40 တထောင်ကလေး "achromatopsia" ကြောင့်ထိခိုက်နေသည်.
အကွောငျး4အသက်အနှစ်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အရောင်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံစမ်းသပ်နိုင်ကြသည်.
ကလေးရောင်စုံပုံသို့မဟုတ်လိုင်းများခွဲခြားနိုင်လျှင်ထိုသူငယ်ထို့နောက်ကလေးက colorblind ဖြစ်ပါတယ်အရောင်ရူပါရုံကိုစမ်းသပ်ရှင်းလင်းလျှင်မရ.
များစွာသောအခြားစမ်းသပ်မှုသူ / သူမပုံ၌ပေးသောအရောင်ပုံစံမျိုးစုံခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်နိုင်ဘူးလျှင် colorblind အများအားဖြင့်ရောင်စုံအစက်ကိန်းဂဏန်းများကြည်လင်သောရလဒ်များကိုများအတွက်အရောင်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကလေးသည်အားပေးပြီးမှနေကြသည်ကနေယူထားပါသည်.
Do not worry because with Vision test https://iristech.co/test-vision သင်တစ်ခုတည်းတစ်ပြားမှပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ colorblind သို့မဟုတ်မရှိမရှိထွက်ကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်.
ဒါဟာအရောင်လူကန်းအရောင်များကိုမမွငျနိုငျသောမဆိုလိုပါဒါမှမဟုတ်အရောင်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ function ကိုစွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်.
ဒါဟာမျိုးရိုးဗီဇ mutation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သောအချက်ကိုမျိုးရိုးအလိုက်တဆင့်ထုတ်လွှင်ဖြစ်ပါတယ်.
ကျွမ်းကျင်သူများကထိုသူငယ်၏အသက်ရောက်ရှိလာသောအခါကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြ4ထို့နောက်သူကရပါမည်ကြောင်းအရောင်ရူပါရုံကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေး.
သူတို့ကိုအရောင်ရှင်းလင်းချက်ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. လည်းသူများအနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်အရောင်အကြားခွဲခြားနိုင်ခြင်းနေသောအသွားအလာအလင်းအိမ်၏အနေအထားကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီ.
Vision ၏ သင့်ရဲ့ colorblindness အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်. ဆော့ဖ်ဝဲ Get နှငျ့သငျဆိုမှုန်ဝါးခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်အတိုင်းအရောင်များတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်.